सिर्जनशील दाजुभाइ - मनोरञ्जन - नेपाल
आशिफ र असिम | तस्बिरहरू : श्रुति श्रेष्ठ
अघिल्लो वर्ष दुई रुपियाँ प्रदर्शन भयो । फिल्मको व्यापार खडेरी लागेका बेला यसको खुद नाफै करोड नाघ्यो । निर्देशक थिए, असिम साह । हिरो आशिफ साह । लगानीचाहिँ दुवैको ।
अहिले 'इन्स्टाको फोटो...' गीतको लोकप्रियता लोभलाग्दो छ । यसको भिडियोले युट्युबमा ७३ लाख भ्युज बटुलिसकेको छ । यसका निर्देशक पनि असिम नै हुन् । भिडियोमा आशिफलाई नै देख्न पाइन्छ । निर्माण पनि उनीहरु मिलेरै गरेका हुन् ।
नातामा दाजुभाइ हुन्, आशिफ र असिम । मनोरन्जनको दुनियाँमा दाजुभाइको 'ब्रान्ड' बेग्लै र उस्तै सिर्जनशील पनि छ । जे गर्छन्, हिट भइहाल्छ । आशिफ नेपालका चर्चित भिजेमा गनिन्छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनमा असिम कहलिएका छन् । आशिफ गायक पनि हुन् । यसबाहेक उनीहरुको 'जी २१' प्रोडक्सन कम्पनी छ, जसबाट डकुमेन्ट्री र विज्ञापन पनि बनाउँछन् । आशिफ भन्छन्, "हाम्रो कमाइको मूल स्रोत विज्ञापन निर्माण नै हो । फिल्मचाहिँ असाध्यै प्यारो लाग्छ ।" दुई रुपियाँअघि उनीहरुले कर्कश बनाएका थिए ।
तस्बिरहरू : श्रुति श्रेष्ठ
दाजुभाइको फिल्मी मोह सुरु हुन्छ, रञ्जना हलबाट । विसं ०४५ को छेकोमा ।
मल्लकालमा कास्मिरका मुसलमान काठमाडौँ उपत्यका आएका थिए । उनीहरुकै सातौँ पुस्ता हुन्, साह दाजुभाइ । दुवै इन्द्रचोकमा जन्मिए, यहीँ हुर्किए । इन्द्रचोकमा अझ पनि उनीहरुका बुबाको पसल छ । घर नजिकै रञ्जना हल थियो । लुकेर फिल्म हेर्न जान्थे । तर सबै कहाँ हेर्न पाउनु ? असिम भन्छन्, "महाबौद्ध गएर पोस्टर हेथ्र्यौं । हिरो, हिरोइन र गुन्डा थाहा हुन्थ्यो । त्यहीअनुसार कथा आफैँ कल्पेर साथीहरुलाई गफ दिन्थ्यौँ, फिल्मै नहेरी ।" त्यो बेलाको कथावाचन सम्झँदा अझै दुवै रोमाञ्चित हुन्छन् । आशिफको प्लस टु सकियो । कफी सप खोले । संयोगवश च्यानल नेपालमा भिजेका लागि अडिसन दिन पुगे । छनोट भइएला भन्ने आशा थिएन । तर ' स्क्रिन टेस्ट' मा पास भए । यहीबाट सुरु भयो, उनको मिडिया यात्रा ।
भिजेको जागिर भए पनि आशिफलाई पर्दाभित्रको काममा रुचि जाग्दै गयो । कार्यक्रम बनाउन, खिच्न, सम्पादन गर्न सिके । त्यसपछि नेपाल वान टेलिभिजनसँग जोडिए । दाइबाट प्रभावित असिमले पनि नेपाल वानबाट करिअर सुरु गरे, कार्यक्रम उत्पादक तथा फिल्मी रिपोर्टरका रुपमा । असिम भन्छन्, "मलाई पर्दामा देखिन मन लागेन । पर्दाभित्रकै काममा रमाएँ ।" टेलिभिजनमा नाम कमाउँदै गर्दा आशिफले म्युजिक भिडियो निर्देशन सुरु गरे । 'सुनसान रातमा...', 'आँखा भरि...', 'धेरै भो...', 'मेरो एउटा साथी छ...' जस्ता परिचित गीतका भिडियो आशिफ र असिम मिलेरै बनाएका हुन् । यतिबेलासम्म आशिफको संगीतसँग औपचारिक नाता गाँसिएको थिएन । बस्, साथीभाइमाझ गाउनु उनको सोख थियो । तर सुगम पोखरेल, गिरीश खतिवडा, कुल पोखरेलसँगको संगतपछि उनको संगीतप्रेम अझ प्रस्फुटन भयो । पहिलो गीत रेकर्ड गरे, 'पहिलो माया...' । युवा पुस्तामाझ प्रिय भयो ।
र्‍यापर गिरीश अमेरिका गएपछि द युनिटी ब्यान्ड टुहुरोजस्तो भएको थियो । त्यही बेला आशिफ द युनिटीसँग जोडिए । साथमा थिए, सुदिन पोखरेल र अमित सिन्हा (एड्रे) । यी तीन तन्नेरी मिलेर 'व्याकरण अफ र्‍याप' नामक एल्बम निकाले । नसोचेको सफलता मिल्यो । एल्बमका सबै गीत हिट भए, 'आज फेरि...', 'जुनी...', 'प्रेम अनि आगो...' आदि-इत्यादि । तीन वर्षसम्म कन्सर्ट गर्न भ्याईनभ्याई । दोस्रो एल्बम अझ निक्लिएको छैन । आशिफ कारण सुनाउँछन्, "सुदिन बिहे गरेर अस्ट्रेलिया गए, मेरो पनि विवाह भयो । पारिवारिक कारणले चाहँदा-चाहँदै एल्बम निकाल्न सकिएन ।" त्यसपछि पनि आशिफले फाट्टफुट्ट गीत गाए । तर उल्लेख्य प्रगति देखिन्न । उनी स्वीकार्छन्, "मैले संगीतलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेकै हो ।"
गायनमा सक्रिय नभए पनि आशिफले फिल्म निर्देशनमा डेब्यु गरिसकेका छन्, कर्कशबाट । यसकै सहनिर्देशक थिए, असिम । दुई रुपियाँसम्म आइपुग्दा निर्देशनको कमान्ड आफैँ सम्हाले । विज्ञापन उनको फिल्म निर्देशनको पाठशाला हो । भन्छन्, "तीस सेकेन्ड वा एक मिनेटमा एउटा पूरै कथा भन्नुपर्छ । यसले दृश्य संयोजन र प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सिकाउँछ ।" दाजुभाइको काम पनि बाँडिएको छ । कम्पनीका उत्पादनको बजारीकरण र कन्टेन्टको पाटो आशिफले हेर्छन् भने भिडियोको प्राविधिक पक्ष र कम्पनीको हिसाबकिताब राख्ने जिम्मेवारी असिमको । बेलाबखत सिर्जनशीलतासँत मतभेद हुन्छ । आशिफ भन्छन्, "जसले आफ्नो कुरा बुझाउन सक्यो, उसकै जित हुन्छ ।"
आशिफ र असिमको कार्यशैली मात्र होइन, अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो छ । बोली पनि उस्तै सुनिन्छ । नजिकका साथीभाइसमेत उनीहरुको आवाज खुट्याउन सक्दैनन् । नेपाली फिल्मवृत्तमा मुस्लिम समुदायबाट उनीहरु जति सफलता कमाउने सायदै कोही छन् । कहिल्यै विभेद झेल्नुपरेन । असिम भन्छन्, "हामी काठमाडौँमै जन्मियौँ, हुर्कियौँ । नेवारी बोल्न सक्ने भयौँ । त्यसैले पनि विभेद भोग्नुपरेन ।" इदमा हिन्दु साथीलाई घरमा लगेर खुवाउँछन् । हिन्दु पर्व पनि मनाउँछन् । वाह ! क्या सहिष्णुता ।
दुई रुपियाँ हिट भएपछि आशिफ र असिमलाई लगानीको ओइरो लाग्यो । उसै पनि हामीकहाँ एउटा हिट हुनासाथ अर्को फिल्म बनाउन हतारिने फिल्मकर्मीको बाहुल्य छ । तर उनीहरुलाई हतार छैन । पटकथा लेखनमै समय खर्चिरहेका छन् । आशिफ भन्छन्, "हामीलाई एकोहोरो पैसा कमाउनु मात्र छैन । दर्शक सन्तुष्ट बनाउनु छ । त्यसका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ, फिल्म राम्रो बनाउनुपर्छ । हामीले यही बाटो रोजेका छौँ ।"